03/03/2018 - Page 2 sur 5 -
Teny vahiny : Mpianatry ny lisea 20 hisitraka ny fampianarana teny anglisy
Fandaharan’asa “English Microscholarship ACCESS Program”. Mpianatry ny lisea 20 avy amin’ny sekolim-panjakana eto antananarivo no hisitraka ny fampianarana teny anglisy ao anatin’io fandaharan’asa io. Haharitra roa taona ny fiofanana omena azy ireo amin’ny teny anglisy, …Tohiny
Fanitaram-pahalalan’ny mpampianatra : Aparitaka eny amin’ny CEG ny « Tableau numérique interactif »
Nahazo kits « tableau numérique interactif » na TNI ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Fitaovana iray ampiasain’ny mpampianatra entina hanatsarana ny fanabeazana sy hanamorana ihany koa ny fampitana lesona. « Projecteurs », solosaina, « camera » ary …Tohiny
Raharaha gadra tafaporitsaka : Mpandraharahan’ny fonja miisa 11 natolotra ny fampanoavana
Omaly no natolotra teo anatrehan’ny fampanoavana ireo mpandraharahan’ny fonja miisa iraika ambin’ny folo voarohirohy tamin’ilay raharaha fandosirana gadra telolahy teny Antanimora ny alin’ny 10 febroary lasa teo. Rehefa nivoaka ny fanapahan-kevitry ny mpampanoa lalàna, dia …Tohiny
Famonoana gasy tany La Réunion : Teratany vahiny voaheloka higadra 20 taona
Taorian’ny niakaran’ny raharaha teo anatrehan’ny fitsarana tao amin’ny nosy rahavavy La Réunion omaly, dia fantatra fa voaheloka higadra 20 taona an-tranomaizina ilay teratany vahiny nitifitra, ary nahafaty teratany malagasy tany Rico Carpaye ny volana aprily …Tohiny